I-gastritis engapheliyo ye-atrophic
I-gastritis ye-atrophic isifo esizimele. Ibhekiselwe inkambo eqhubekayo ye-atrophy yamangqamuzana angaphakathi kwezicubu zangaphakathi. Lokhu kuholela ekushintsheni ekusebenzeni kwezimoto, ukunxusa kanye neminye imisebenzi. Ngokuvamile ezinye izitho ezixhumene ngqo nesisu zihilelekile kule nqubo: umuthi wamathumbu, isisu, isibindi kanye nezigulane. Ukudakwa ngokweqile kuholela ekuxhumeni kwi-pathogenesis yesimiso sezinzwa kanye ne-hematopoiesis.
Izimpawu ze-gastritis engapheli
Ngezigaba ezahlukene zokuthuthukiswa, lezi zimpawu ezilandelayo zesifo ziyabonakala:
udonga oluncane lwesisu;
umsebenzi wehla futhi ukuwohloka kwezigulane.
I-gastritis ye-atrophic egxile kakhulu nokuphathwa kwayo
Loluhlobo lwesifo lubhekene nokubunjwa kwe-foci yezicubu eziguquliwe ezindongeni zesisu. Ukuhlala ezindaweni ezinempilo kuzama ukukhokhela ukungabi khona kwe-hydrochloric acid ngokukhuphula ukhiye. Zonke ezinye izimpawu zifana ncamashi ne-gastritis evamile. Uma inani elikhulu lezindawo ezithintekile livela, lesi sifo siba yisifo se-atrophic grirititis esingapheli.
Ngokuyinhloko, le ndlela yokugula iyaziwa lapho umzimba uqala ukungahambisani nokudla okuthile. Ngokujwayelekile yizinyosi, ubisi, inyama enamafutha, kanye nezitsha eziphekwe ngesisekelo sabo. Ngemuva kokungena esiswini, ukuqubuka kwenhliziyo nokucabangela kuqala ukuqala, okuholela ekuhlanzeni . Ukuxilongwa okuqondile kungenziwa kuphela ochwepheshe emva kokuhlolwa kwama-laboratory.
Ukwelashwa kuqokwa, kusukela esiteji sesifo, isimo se-mucosa nezinye izici. Kulesi simo, kuyadingeka kuphela ngesikhathi ukwanda kwesifo.
Ukwelashwa kwe-gastritis engapheli
Ukwelashwa kuqala ngokubuyekezwa ngokugcwele kokudla kwansuku zonke kanye nezinguquko zokuphila. Okokuqala, ukudla esiswini kumele kuhanjiswe kakhulu futhi kufudumele kakhulu ukuze kugweme ukulimala komshini ku-mucosa.
Kusukela ekudleni kumele kuphele ukudla okungavusa isisu:
Kudingeka futhi ukushiya inyama enamafutha (ungabiliswa kuphela noma uphekwe umbhangqwana), ama-broth, amakhowe kanye nanoma yimaphi amakha, ungaphuzi utshwala, ikhofi kanye neziphuzo ze-carbonated.
Ngemuva kwalokho, imithi inqunywe, encike ebufakazini be-laboratory.
I-Asparkam - izinkomba zokusetshenziswa
Umfutho wegazi ophansi - izimpawu
Pradaksa - ezifanayo
I-thoracic chondrosis - izimpawu
Okusha ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-2
I-Hydrocortisone - amafutha
I-Tubootitis - izimpawu kanye nokwelapha
Sarcoidosis - ukwelashwa
I-Teimurova paste - isicelo
Ukugonywa ngokumelene nomkhuhlane we-H1N1
I-Plaque ngolimi - izizathu
Ukuhlaziywa kwesitulo se-dysbiosis
Umkhosi kaSt. Andrew - ukubhula
UCate Blanchett: "Indlela yokufundisa izingane ukuba zibekezelele emphakathini ongahlanganyeli imibono yami?"
Ukuthola izinaliti zamapulangwe abantu
Biography kaCatherine Deneuve
U-Natalia Vodyanova waba ubuso be-eco-iqoqo le-brand H & M
Isipho somyeni ngosuku lwakhe lokuzalwa
Irayisi elimnyama "ebusuku laseNingizimu" - kuhle nokubi
I-Kanye West inikeze isiphetho kubahleli be-Grammy
Indlela yokuqinisa izinwele kusuka ekulahlekelweni?
Kanjani ukususa ngokushesha izinyosi?
Indlela yokukhulisa i-oki ephuma e-acorn?
Hydrogel for izitshalo
Wedding dress nge lace
Kuyini ukukhishwa kwe-eyelashes, futhi inqubo yenziwa kanjani?
Ungasusa kanjani amadatha avela ku-dandelion?